Elasticsearch nifindra tany amin'ny fahazoan-dàlana SSPL tsy andoavam-bola | Avy amin'ny Linux
Elasticsearch BV dia nanambara ny fanovana lisansa ho an'ny sehatry ny fikarohana, analytics ary tahiry Elasticsearch, ary koa ny sehatrasa Kibana.
Toy ny famotsorana Elasticsearch 7.11, ny tetikasa hifindra amin'ny lisansa Apache 2.0 mankany amin'ny fahazoan-dàlana SSPL izy io (Fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe), izay manampy fepetra ilaina amin'ny fampiasana fanampiny mba hiantohana ny serivisy cloud. Ho an'ireo izay tsy afa-po amin'ny fehezan-dalàna momba ny fahazoan-dàlana SSPL dia omena alalana ara-barotra, raha mbola hozaraina amin'ny alalàn'ny Apache 2.0 kosa ny tranomboky ho an'ny mpanjifa.
Ny tetikasa MongoDB dia efa mampiasa SSPL ary manome ny fahaizana manova sy mizara kaody, saingy tsy nodinihan'ny Open Source Initiative (OSI), fikambanana fanarahan-dalàna momba ny fahazoan-dàlana malalaka.
Ireo mpisolovava Red Hat dia manana fahazoan-dàlana sokajy SSPL tsy andoavam-bola, arahin'ny Tetikasa Fedora handrara ny fampidirana fonosana miaraka amin'ireo vokatra ao amin'ity lisansa ity ao amin'ny toerana anaovany izany.
Ny fankatoavana OSI dia heverina ho tsy azo inoana, satria misy olana mampiady hevitra ao amin'ny fahazoan-dàlana momba ny fanavakavahana sokajin'ireo mpampiasa sasany (mpanome tolotra rahona).
Ankoatra izany, Tsy nahavita ny famerenana ireo mpanoratra SSPL ary nesorin'izy ireo ny fangatahana natolotra teo aloha handinihana ity fahazoan-dàlana ity amin'ny OSI.
Ny fahazoan-dàlana SSPL dia namboarina tamin'ny fomba izay, raha ny fampiharana azy, ny fampiharana eo ambanin'ity lisansa ity dia tsy azo ampiasaina amin'ny serivisy rahona raha tsy mividy fahazoan-dàlana ara-barotra; raha tsy izany, ny kaody ny singa rehetra tafiditra amin'ny fikirakirana ny serivisy rahona, ao anatin'izany ireo an'ny antoko fahatelo, dia mila alalana amin'ny SSPL indray.
Tsarovy fa ny fahazoan-dàlana SSPL dia mifototra amin'ny lahatsoratry ny AGPLv3, izay nanovana ny fanovana ho an'ny fizarana 13. Ny fiovana dia ahena ho fanampiana ny takiana mba hanome eo ambanin'ny fahazoan-dàlana SSPL tsy ny kaody amin'ny fampiharana ihany, fa koa ny kaody loharano an'ireo singa rehetra tafiditra ao amin'ny andininy ny serivisy rahona.
Raha ny filazan'i Matthew Garrett, mpiara-mitantana ny Free Software Foundation, dia takiana izany manitsakitsaka ny fampifanarahana GPL ary fahazoan-dàlana copyleft hafa izay mandrara ny fanavaozana ny fahazoan-dàlan'ny kaody hafa.
Noho ny antony nanovana ny fahazoan-dàlana dia misongadina ny faniriana hisoroka ny mandeha maimaimpoana amin'ny mpivarotra serivisy cloud amin'ny rindrambaiko loharano misokatra. Tsy afa-po ny mpamorona amin'ny famerenan'ny mpamatsy rahona ny Elasticsearch amin'ny endrika serivisy rahona, saingy tsy mandray anjara amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izy ireo ary tsy manampy amin'ny fampandrosoana. Misy toe-javatra iray natsangana izay ireo mpamatsy rahona izay tsy mifandray amin'ilay tetikasa dia mahazo tombony amin'ny famerenana amin'ny laoniny ireo vahaolana mivelatra ivelan'ny-boaty, ary ireo mpamorona azy ireo dia tsy manana na inona na inona.
Tsy hisy fiatraikany amin'ny mpampiasa Elasticsearch ny fanovana lisansa izay mampiasa ny sehatra ho toy ny backend, fa hisy fiantraikany amin'ny mpanome serivisy rahona izay mivarotra ny asan'ny Elasticsearch avy ao anaty boaty amin'ny endrika serivisy rahona.
Ny serivisy rahona dia mila mividy fahazoan-dàlana ara-barotra, manokatra ny kaodin-drafitr'asao manontolo, mijanona amin'ny kinova Elasticsearch teo aloha, izay manana fotoana fanohanana voafetra, na miaraka manohy ny fampandrosoana ny fork an'ny Elasticsearch ambanin'ny fahazoan-dàlana Apache. Fork Elasticsearch dia azo noforonina ho toy ny fanitarana misaraka ny tetikasa Open Distro ho an'ny Elasticsearch novolavolain'i Amazon.
Ny mpandinika sasany dia manombatombana amin'ny fampiasana hatrany ny Elasticsearch eo ambanin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa vaovao izay mampivelatra ny serivisy an-tserasera ho loza mitatao ho an'ny orinasa, satria tsy azo ampiharina ny fepetra hanokafana ireo fivoarana mifandraika amin'izany. Ohatra, noho ny teny tsy marim-pototra, ny SSPL dia mety takiana amin'ny fahazoan-dàlana indray ny lozisialy rindrambaiko iray manontolo, ao anatin'izany ny rafitra miasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Elasticsearch nifindra tany amin'ny fahazoan-dàlana SSPL tsy maimaim-poana
"Elasticsearch dia mifindra any amin'ny lisansa SSPL tsy maimaimpoana", avy amin'ny lohateny hoe tsy mety izahay amin'ny mpandika teny mandeha ho azy an'i Google sy ny tsy fanajana tanteraka ny rindrambaiko maimaimpoana.